थाइल्याण्डमा बनेको कोरोना भाइरसको औषधिले ४८ घण्टामै विरामी निको हुने डाक्टरको दा’बी ! – Khabarhouse
थाइल्याण्डमा बनेको कोरोना भाइरसको औषधिले ४८ घण्टामै विरामी निको हुने डाक्टरको दा’बी !
Khabar house | २१ माघ २०७६, मंगलवार ०३:१६ | Comments
एजेन्सी । तिब्र रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण चीन यतिबेला निकै ठूलो सं’कटमा परेको छ। चीनको वुहानबाट फै’लिएको यस भा’इरसका कारण अहिले ३६२ जनामो मृ’त्यु भइसकेको छ। १७ हजार भन्दा बढीमा कोरोना भाइ रसको सं’क्रमण देखिएको छ। कोरोना भाइसको औषधि बनाउनका लागि चिकित्सक र वैज्ञानिकले अहोरात्र ख’टिएर काम गरिरहेका छन्।
यसै क्रममा थाइल्याण्डका डाक्टरले केही औ’षधि मिलाएर नयाँ औ’षधि बनाएका छन्। जसबाट कोरोना भाइरसको सं’क्रमणका वि’रामी निको हुने दाबी गरिएको छ। थाइल्याण्डका डाक्टर क्रिएनसक अतिपार्नवानिचले ७१ वर्षीया महिलालाई आफूले निर्माण गरेको औ’षधि दिएर ४८ घण्टामा ठिक बनाएको दा’बी गरेका छन्। कोरोना भाइरसको सं’क्रमणबाट ग्रस्त वि’रामी उक्त औ’षधि दिएको १२ घण्टामा बेडबाट उठेर बस्न सक्ने भएको उनले बताएका छन्।
ती महिला त्यो भन्दाअघि केही गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताइएको छ। ४८ घण्टामा ती महिला ९० प्रतिशत ठिन भएको ती डाक्टरले बताएका छन्। केही दिनमा अब ती महिलालाई पूर्ण रुपमा ठिक बनाएर डिस्चार्ज गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ। डाक्टर क्रिएनसकले भनेका छन्, हामीले ल्याबमा यस औ’षधिको प’रीक्षण गर्दा यसबाट सकारात्मक नतिजा मिल्यो। त्यसपछि विरामीमा प्रयोग गरेको १२ घण्टामै वि’रामीलाई राहत मिलेको थियो।
उनले कारोना भाइरसको उपचारका लागि आफूले ए’न्टी फ्लू ड्’रग ओ’सेल्टामिविरमा लो’पिनाविर र रि’टोनाविर मिलाएर नयाँ औ’षधि बनाएको बताएका छन्। ओ’सेल्टामिविरलाई एचआइभीको उपचारका लागि प्रयोगमा ल्याइने गरिन्छ। थाइल्याण्डमा अहिलेसम्म १९ जनामा कोरोना भाइरसको सं’क्रमण भेटिएको बताइएको छ। जस मध्ये ८ वि’रामीलाई १४ दिनमा ठिक बनाएर घर पठाइसकेको छ भने ११ जनाको अहिले पनि उपचार भइरहेको छ।